पछिल्लो समय नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणमा अवरोध भएको चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन् । स्थानीयको विरोधका कारण सुरुङमार्ग निर्माण बन्द रहेको कतिपय मुलधारका मिडिया रिपोर्टमा समेत उल्लेख गरिएको छ । के साँच्चिकै सुरुङमार्फत निर्माण अवरुद्ध बनेको हो त ? लोकान्तरको टोली स्थलगत रिर्पोटिङको लागि त्यस स्थानमा पुग्दा काम धमाधम भइरहेको थियो । यसबारे बुझ्दै जाँदा स्थानीयले केही विषयमा स्पष्ट पार्नका लागि माग गरेको तर काम अवरुद्ध नभएको पाइयो । चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष गोपी सुर्खेतीले भने, ‘स्थानीयले सुरुङमार्गको काम ...
Aarthik Abhiyan 22 दिन पहिले
स्थानीयलाई खानेपानी देऊ
नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणको कुरा सुरु हुँदा नै स्थानीय जनतालाई जमिनको क्षतिपूर्ति दिने र प्राकृतिक स्रोतसाधनमा पर्न जाने प्रभावलाई मध्यनजर गरी स्थानीय जनताको माग पूरा गरिदिने सहमति सरकारले गरेको थियो । सुरुङमार्ग निर्माण भइरहेका बेलामा चन्द्रागिरि नगरपालिकाको स्थायी खानेपानीको मूल सुक्यो । भूमिगत सुरुङ खनिएपछि हालसम्म प्रयोग गर्दै आएका खानेपानीको मूल सुक्न गएको हो । पानी […] The post स्थानीयलाई खानेपानी देऊ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
स्थानीयले गरे नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्गमा तोडफोड, पाँच दिनदेखि काम ठप्प
काठमाडौं : नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्गमा स्थानीय बासिन्दाले आयोजनामा तोडफोड गरेका छन्। विभिन्न माग राखी गत सोमबारबाट नै स्थानीयले तोडफोड गरेको नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजना आयोजनाका प्रमुख नरेशकुमार शाक्यले जानकारी दिए।शाक्यका अनुसार हालसम्म पनि काम सुचारु भएको छैन। ‘स्थानीयसँग सहमतिमा जाने छलफल गरिरहेका छौँ, सहमति भएपछि काम थाल्छौँ’, उनले भने।तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ साल कात्तिकमा नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्गको शिलान्यास गरेका थिए तर हालसम्म का
काठमाडौं । सिस्नेखोलादेखि सतुंगल जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सडक विभागले अहिले जाइकाको स्वीकृति कुरिरहेको छ । सडक विभागले करिब २० दिन अघि जाइकासँग स्वीकृति माग गर्दै पत्र पठाएको थियो । जाइकाको स्वीृकति ...
२२ असार, काठमाडौं । सिस्नेखोलादेखि सतुंगल जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सडक विभागले अहिले जाइकाको स्वीकृति कुरिरहेको छ । सडक विभागले करिब २० दिन अघि जाइकासँग स्वीकृति माग गर्दै पत्र पठाएको थियो । जाइकाको स्वीृकति नआइसकेकाले अहिले टेन्डरको काम अघि बढ्न सकेको छैन । जाइकाको स्वीकृति आएसँगै निर्माण कम्पनी छनौटको लागि टेन्डर आह्वान …